နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွက်ချက်ခြင်း - Hello Sayarwon
နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို တွက်ချက်ခြင်း
Dr. Zin Thu Thu Win မှ ရေးသားသည်။ 22/05/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
နှလုံးရောဂါ အများစုသည် ကုသ၍ရသော၊ ထိန်းချုပ်၍ရသော၊ အဆင့်မြှင့်၍ရသော၊ သွေးပေါင်ချိန် မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော၊ ဆေးလိပ်၊ ကိုလက်စထရော ပမာဏ၊ အဝလွန်ခြင်များအတွက် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် တချို့သော အဆင့်မြင့် နှလုံးရောဂါများသည် ကုသ၍ မရနိုင်ပါ။
သွေးပေါင်ချိန် တက်ခြင်းသည် နှလုံးဖောက်ခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းများ အတွက် အဓိကကျသော အကြောင်းအရင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရင်းများမှာ ကြိုတင်သိရလျှင် ကာကွယ်နိုင်သောအချက် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုလက်စထရော၊ တရိုင်ဂရစ်စရိုက်၊ မကောင်းသော အဆီ စသော အဆီပမာဏ ပုံမမှန်ခြင်း၊ ကောင်းသော အဆီများ နည်းခြင်း စသည်တို့သည် နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာများ စားသုံးခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ဆေးသောက်ခြင်းတို့သည် အဆီပမာဏ ပုံမမှန်ခြင်းကို ကုသနိုင်ပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်သုံးခြင်း၊ ဆေးရွက်ကြီး သုံးစွဲခြင်းတို့သည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပို၍ များပြားစေပါသည်။ ထိုဘေးများမှာ အသက်ငယ်စဉ် အချိန်မှစ၍ သုံးစွဲသူများ၊ အလွန်အကျွံ ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ မိန်းကလေး ဆေးလိပ်သောက်သူများအဖို့ ပို၍ ခံရတတ်ပါသည်။ မိမိ မသောက်သော်လည်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆေးလိပ်သောက်သူများ ရှိလျှင်လည်း ခံရတတ်ပါသည်။ ထိုသည်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းသည်လည်း နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်းကို ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျစေပါသည်။ အဝလွန်ခြင်းသည်လည်း နှလုံးရောဂါ နှင့် ဆီးချိုရောဂါကို ပိုဆိုးစေသော အချက်တစ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
အထူးသဖြင့် အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါသည် နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို ၂ ဆ မြင့်တက်စေပါသည်။ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ များလာလေလေ သကြားဓါတ် များလာလေလေ ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဆီးချိုကို ကြိုတင် မသိရှိပါက နှလုံးဖောက်နိုင်နှုန်း၊ လေဖြတ်နှုန်း၊ ကျောက်ကပ် ပျက်စီးခြင်း၊ ခြေထောက်ဖြတ်ရခြင်းနှင့် မျက်စိကွယ်ခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။
စိတ်မကျန်းမာ သူများအဖို့လည်း နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်နှုန်း ပို၍ များပြားစေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ လူအသိုင်းအဝိုင်း မဝင်ဆံ့ခြင်း၊ စိတ်လှုပ်ရှားခြင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
တစ်နေ့ အရက်တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက် သောက်သုံးခြင်းသည်လည်း နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျစေနိုင်ပါသည်။ သို့သော် သောက်သုံးမှု များလျှင် နှလုံးကြွက်သားများကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ၊ ဟော်မုန်းဆေးများသည်လည်း နှလုံးရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကို လျော့ကျစေပါသည်။
• အသက်။ နှလုံးရောဂါသည် အသက်ကြီးလာသည်နှင့် အမျှ ပို၍ ဖြစ်နိုင်ခြေ များပြားလာပါသည်။ အသက်ကြီးလာလေလေ နှလုံးသည် ဇီဝကမ္မ ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ နှလုံးထိခိုက်လာပြီဆိုလျှင် အသက်အရွယ် ကြီးခြင်းသည်လည်း ကုသမှုအပိုင်းတွင် နှောင့်နှေးစေပါသည်။
• လိင်။ အမျိုးသားများသည် သွေးမဆုံးသေးသော အမျိုးသမီးများထက် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ပို၍ များပြားပါသည်။ အမျိုးသမီးများ သွေးဆုံးပြီးလျှင် ဖြစ်နိုင်ခြေတူသွားပါသည်။ လေဖြတ်နိုင်ခြေများသည် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်နိုင်ခြေတူပါသည်။
• မိသားစုတွင် ရောဂါပင်ကိုယ် ရှိ၊ မရှိ။ ပထမ မျိုးဆက်များသည် အသက် ၆၅ နှစ် မတိုင်မီ (အမျိုးသမီးများ)၊ အသက် ၅၅ နှစ် မတိုင်မီ (အမျိုးသားများ) သည် နှလုံးရောဂါ နှင့် လေဖြတ်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေများပါသည်
• လူမျိုးစုများ။ အာရှနှင့် အာဖရိက နိုင်ငံများသည် တခြားသော မျိုးနွယ်စုများထက် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ပို၍များပြားပါသည်။
Coronary Heart Disease Risk Factors. https://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/hd/atrisk. Accsesed January 19th, 2017.
နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် ဖြည့်စွက် ဓါတ်စာများ အကြောင်း